Kahor kulanka El Clasico Marcelo oo hadalo kulul ku karbaashay Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Real Madrid) 26 Okt 2018. Laacibka reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa wuxuu xaqiijiyay in Los Blancos ay ka weyn tahay ciyaaryahan kasta xitaa Cristiano Ronaldo.
Dhinaca kale difaaca garabka bidix Marcelo ayaa wuxuu tilmaamay in tababaraha reer Spain ee Julen Lopetegui uu sameynayo wax walba si ay Real Madrid u gasho jawi wanaagsan.
Real Madrid ayaa haatan ku gudi jirta diyaar garowga kulanka xiisaha badan ee El Clasico, kaasoo ay Axada ku booqan doonaan Barcelona garoonka Cump Nou, wuxuuna kulanka ka tirsan yahay kulamada 10-aad ee horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Los Blancos ayaa kulankan El Clasico ciyaari doonta la’aanta Cristiano Ronaldo, kaasoo suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay kaga dhaqaaqay kooxda reer Talyaani ee Juventus.
Laakiin Marcelo ayaa kahor kulanka Barcelona yiri: “Bixitaanka Ronaldo? Kadib marka aad ka soo noqoto fasaxaaga, isla markaana aad la kulanto in Cristiano uu ka tagayo kooxda, aniga ahaan waxay ila noqotay layaab, mana ahayn waxaan filayay”.
“Dhamaanteen waxaan u qabnay in Ronaldo uusan ka tageynin kooxda Real Madrid, waxay ahayd 9 sano ee cajiib ah, had iyo jeer waan wada joognay, waxaanu noqonay saaxiibo isku dhow, laakiin noloshu way socotaa, qof kastana wuu ka war qabaa waxa uu hiigsanayo iyo himiladiisa”.
“Real Madrid waa koox weyn, sidoo kale Cristiano waa ciyaaryahan weyn, balse Los Blancos waxay ka weyn tahay ciyaaryahan kasta, sababtoo ah waxay had iyo jeer leedahay taariikh aad u weyn”.
“Ronaldo wuxuu ka qeyb qaatay qeyb ka mid ah taariikhda Real Madrid, ee ma ahan taariikhda oo dhan, Real Madrid ma istaagi doonto, saameyna kuma yeelan doonto, kadib bixitaanka Cristiano, ciyaartoyda waxay ka tagaan kooxahooda, sidoo kale waxay ka fariistaan kubada cagta, balse Real Madrid waa mid sii jiri doonta”.